You are at:Home»संगालाे»उपयोगी जानकारी»म र मेरो नेपाल
By HamroGorkha on	 October 12, 2018 उपयोगी जानकारी, धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु, पर्यटन, लेख रचना
मेरो सम्पूर्ण जीवनकाल १९९४ देखि २०७५ सालसम्म संक्रमण राजनीतिको छत्रछायामै बितेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ । शैशव कालका बेला १९९७ सालको सहिद काण्ड सम्झनामा छैन । २००७ साल पनि ‘जिन्दावाद’ र ‘मुर्दावाद’ भनेर उफ्रने बाहेक अरू केही भएन । त्यसपछि २०१७ सालसम्म पढाइतिर लागेंँ । २०१७ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले जागिरे बनाइदियो ।
२०४७ सालमा गिरिजाप्रसादले ढाक्रे बनाइदिए । ३० वर्षको जागिरे अवधिमा नेपाल घुमेर हेरेँ । नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भेटेरै ढोगभेट गरियो । आजका दिनमा फर्केर हेर्दा त्यो नेपाल कहाँ पुग्यो र ती नेपाली कहाँ छन् भन्ने प्रश्नहरू मगजमा खेलिबस्छन् ।
मेरो शैशव कालमा जति जनसंख्या नेपालभित्र थियो, अहिले उत्तिकै नेपाली नेपाल बाहिर छन् । किन ? काम र मामको खोजीमा अरूको सेवा गर्न, नोकरी गर्न, चाकरी गर्न, गुलामी गर्न । उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निर्धन चाकरी भन्थे हाम्रा पूर्वज । त्यसको अर्थ जति सेवा क्षेत्रबाट कमाइ हुन्छ, त्योभन्दा बढी वाणिज्य र उद्योगबाट हुनुपर्छ । त्यसभन्दा अझ बढी आम्दानी कृषि र वन क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । अर्थ व्यवस्थाको यो तीनतले मन्दिर (आर्थिक पिरामिड) स्थायी र दिगो विकासको मूल स्तम्भ बन्न सक्छ ।
हामीले हाम्रै भूमि व्यवस्था र आफ्नै माटोको उब्जनीबाट समृद्धि भित्र्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रा स्रष्टा एवं द्रष्टाले राष्ट्रिय विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि सार्दा तराई–मधेसमा अन्नबाली, पहाडमा फलफूल र तरकारी एवं हिमालमा पशुपालनको विकासलाई निर्देशित सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेका हुन् । यिनै तराई, पहाड र हिमाललाई अझ नियालेर हेर्न–बुझ्न सकेनौं र तिनका प्रकृति, परिवेश र प्रवृत्ति सम्मत विकास निर्माण गर्न सकेनौं भने हाम्रो राष्ट्रको भौतिक स्थिरतामा संकट आउन थाल्छ ।
नेपालको २३ प्रतिशत भूभाग ५ हजार मिटरभन्दा उच्च भागमा छ । त्यहाँ सामान्यतया बाहै्र महिना हिउँ जम्छ । हिउँकै घर भएकाले यसलाई ‘हिमालय’ (हिम+आलय) भनिएको हो । यही घरमा रहस्यमय प्राणी यती बस्छ भन्ने धेरैको विश्वास छ । कतिपय वैज्ञानिक यतीको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैनन् । यतीको अस्तित्व स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि यतीजस्तो हिममानवको बासस्थान पृथ्वीमा कतै छ भने त्यो हिमालय नै हुनुपर्छ । यती कौतुहल बचाइराख्नु उचित हुन्छ ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत कञ्चनजंगा, ल्होत्से, मकालु, चोयु, धौलागिरि, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लाङटाङ आदि हिमशिखर विश्व पर्वतारोहण परिदृश्यमा विशिष्ट नाम हुन् । पर्वतारोहण र पर्यटनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पर्यावरणसँग गाँसिएको हुन्छ । स्थानीय प्रदूषणका विषयमा नेपालले सकारात्मक कदम चाल्दै आएको छ ।
विश्वको बढ्दो तापमानको प्रभाव भने हामीले आँकलन गर्नसकेका छैनौं । विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् कि विश्व तापमान वृद्धिको परिदृश्यमा नेपालको तराई र पहाडमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा तापमान धेरैबढ्दो छ । सन् २००७ मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले सन् २०३५ सम्ममा हिमालय सबै पग्लिसक्छ भन्ने होहल्ला मच्चाएको थियो । यस्ता मिथ्याङ्कले हामी पीडित छौं । तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको फन्दामा नपर्दा पनि हिमालको हिउँ घटेको अनुभव र अवलोकन बारम्बार सुन्ने गरेका छौं ।
हिमालयमा जमेको हिउँमा कार्बनका कण भेट्टाइएका छन् । हिमालको थाप्लोमा मडारिने कालो बादल हाम्रा नयाँ पाहुना हुन् । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको औद्योगिक विकासको प्रदूषण ‘एसियन कालो बादल’ (एसियाटिक ब्राउन क्लाउड) नामले प्रसिद्ध छ । हाम्रा हिमाल, हिमनदी तथा हिमताल अस्थिर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । जोखिम कम गर्ने क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । विश्व जलवायु परिवर्तन विशेष गरेर विश्व उष्णीकरणको पहिलो सिकारका रूपमा हिमालय खडा छ ।
सामान्यतया ३ हजार मिटरभन्दा उच्च भू–भाग लेकाली क्षेत्र मान्यौं भने त्यहाँ खेतीपाती हुँदैन । अपवादका रूपमा हिमालपारिका भोट क्षेत्रमा भने ४ हजार मिटरसम्म पनि अन्नबाली लाग्छ । त्यहाँ घाम लाग्छ । बादलले छेक्दैन ।
हिमालय पर्वत श्रेणीको दक्षिणी भेगमा ४ हजार मिटरको उचाइमाथि रूख उमिँ्रंदैन । सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा हुर्कने मुख्य रूख भोजपत्र हो । विभिन्न चिमाल र गुराँस तथा केही ठिंग्रेसल्ला पनि हुन्छन् । वृक्ष रेखाभन्दा उपल्लो लेकपाटनमा घाँसेमैदान अधिक हुन्छ ।
हजारभन्दा बढी प्रजातिका भुइँफूल प्रशस्तै फुल्छन् । जडीबुटी पनि प्रशस्तै फस्टाउँछन् । लेकाली क्षेत्र पशुपालन र जडीबुटीका लागि उपयुक्त छ । हाम्रो लेकाली क्षेत्र मेचीदेखि महाकालीसम्म सामान्यतया एकैनासको वन–वनस्पति पाइने क्षेत्र हो । पहाडी क्षेत्रमा जस्तो पूर्व–पश्चिम भिन्नता लेकाली भागमा पाइँदैन ।
लेकाली भू–भागको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई तीनतिरबाट नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ । पशुपालनमा विशेष दक्खल सँगालेका गोठालाहरू विदेश पलायन हुनाले लेकाली खर्क र पाटन रित्तिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव थपिनाले चरिचरन क्षेत्र काँडेदार झारको अतिक्रमणमा पर्नथालेका छन् । प्राकृतिक वृक्षरेखामा फेरबदल भएर जैविक विविधतामा प्रभाव देखिन थालेको छ । यार्चा गुम्बु लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादनमा विशेष व्यवस्थापनको खाँचो देखिन थालेको छ । लेकाली उत्पादनको विकासमा राष्ट्रिय प्रयास न्युन छ । बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
नेपालको परिचय विशेषमा पहाड–पर्वतका कुरा अधिक झल्कन्छ । हुन पनि औलो निर्मूल हुनुभन्दा पहिलेको नेपाल मानव बस्ती पहाडैतिर केन्द्रित थियो । पहाडिया मूलका शासक र प्रशासकका कारण पनि नेपालको परिचय पहाड–पर्वतसँग अधिक जोडिन पुग्यो ।
त्यसमा हिमालयको प्रभाव थपिन पुग्दा नेपालको पहिचान हिमाल, पहाड–पर्वत अर्थात् अंग्रेजी शब्दले ‘माउन्टेन’ भन्ने परिवेश बुझिन थाल्यो । यस पृथ्वीको लगभग २४ प्रतिशत भूभाग पहाड–पर्वतले ओगटेको छ । तर माउन्टेनको परिभाषा चित्तबुझ्दो रूपमा स्थापित भएको छैन । पहाड–पर्वत अझै कौतुहलको विषय छ । पहाड बुझ्न त्यसलाई चढेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफैंले नव्यहोरिकन पहाड–पर्वत बुझ्न सकिँंदैन । तसर्थ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि नेपाल बुझ्न गाह्रो छ ।
नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको संयुक्त रूप हो । तर यिनको परिभाषा र नामकरण गर्ने विद्वानहरूबीच एकमत छैन । सबैभन्दा सरल परिभाषा हर्क गुरुङले जुराइदिएका छन् । उनका अनुसार बाह्रैकाल हिउँ जम्ने क्षेत्र ‘हिमाल’ (५ हजार मिटरभन्दा उच्च क्षेत्र), जाडोमा हिउँ पर्ने र अरू बेला खुल्ने क्षेत्र ‘लेक’ (३ हजार–५ हजार मिटर) र हिउँ नपर्ने खण्ड ‘पहाड’ (३ हजार मिटरभन्दा होचो भाग) हुन् ।
हिमाली क्षेत्रले नेपालको २३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । लेकाली क्षेत्रले २० प्रतिशत जमिन ओगट्छ । त्यहाँ लगभग ७ प्रतिशत जनसंख्या छ । पहाडी क्षेत्रले ३० प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । त्यहाँको जनसंख्या सम्पूर्ण नेपालको ३८.१७ प्रतिशत छ ।
जनसंख्या र जमिनको दृष्टिले पहाडी क्षेत्र संवेदनशील र चलायमान छ । २०१८ सालदेखि २०३७ सालमा मैले घुमेका पहाडमा कहीं सडक थिएन । राष्ट्रियकरणको प्रभाव र काठ–दाउराको अभावले वन मासिने क्रम तीव्र थियो । डाँडा नाङ्गिने र मानिस तराईतिर बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दै थियो । भूक्षयका कहालीलाग्दा वृत्तान्त पढ्न पाइन्थ्यो ।
पहाडी क्षेत्रलाई ‘मिडल माउन्टेन’ भन्ने चलन छ । जैविक विविधता विशेष गरेर वन विविधताका दृष्टिले पहाडी क्षेत्र ज्यादै धनी छ । नेपालका ३५ प्रकारका वनमध्ये २८ प्रकारका वन यस क्षेत्रभित्र भेटिन्छ । नेपालका ११८ खाले पर्यावरणमध्ये ५३ वटा यसै क्षेत्रभित्र पाइन्छ । सांस्कृतिक विविधताको सर्वाधिक प्रचुरता यही पहाडी क्षेत्रमा कायम छ । जात–जाति, भाषा–भाषी, भेषभूषाको विविधता मेचीदेखि महाकालीसम्मको पहाडी क्षेत्रमा अधिक भेटिन्छ ।
वर्तमान नेपालका प्राय: सबै पहाडी जिल्ला सडक सञ्जालभित्र परिसकेका छन् । पञ्चायत कालको गाउँ फर्क र जनश्रमदान, त्यसपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने अभियान र संघीय संरचनाको नयाँ जोशले बाटो खन्ने कामलाई सर्वाधिक महत्त्व दिइआएको छ । बाटो खन्नुको अर्को नियति नयाँ पहिरो निम्त्याउनु र सवारी दुर्घटनामा ज्यान फाल्नु स्वाभाविक बनेको छ ।
मोहन मैनालीले ‘देखेको देश’ (२०७५) मा पहाडी बाटोको वातावरणीय चिन्ता प्रस्टसँग उजागर गरेका छन् । समयमै गल्ती सुधार भयो भने हाम्रा पहाडी परिवेश घाउ निको पार्न सक्षम छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थापना गरेको छ । नेपालका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनमध्ये पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक वनको भूमिका सराहनीय सावित छन् ।
वातावरणको दृष्टिले पहाड सक्रिय रूपमा जिउँदो छ । पहाडलाई फलफूल, तरकारी र जडीबुटी खेतीले समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्दैन । चिया, कफी, सुठो, अदुवा र अलैंचीमात्र हैन, चिराइतो र टिमुरजस्ता जडीबुटी पनि प्रशस्तै उत्पादन हुन्छन् । हामीले तराई र पहाडलाई उत्पादनशील बनाउन सक्यौं भने हामीकहाँ आइपुग्ने रेल होस् वा ट्रक, यहाँबाट रित्तै फर्कनु पर्दैन । पहाडी क्षेत्रको विकासमा जलविद्युतलाई विशेष बढावादिने र पर्या–पर्यटनको विकासमा अरू सक्रिय हुनुपर्नेकुरामा दुईमत नहोला । तर जमिनको स्थायित्व रसमन्यायिक सामाजिक व्यवस्थामा कुनै आँच आउनु हुँदैन ।
म दुई वर्षको दूधेबालक छँदा चितवनको जंगलमा जुद्धशमशेरको एउटै सिकारमा १२० वटा बाघ, ३८ वटा गैंडा, १५ वटा भालु र २७ वटा चितुवा मारिएको थियो । अंग्रेज पाहुना लर्ड लिनलिथगो कति प्रसन्न भए होला ? चितवनको वनजंगल कति घना थियो होला ? आज त्यहाँमात्र ९३ वटा बाघ छन्, त्यो पनि सरकार, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको ४६ वर्षको प्रयासपछि ।
चितवनदेखि पूर्वमा कोशी नदीसम्मको तराई भावरमा पनि निकै घना वन थियो भन्ने विवरण कोलोनेल कर्कपाट्रिकले २ सय २५ वर्ष पहिले (सन् १७९३) उल्लेख गरेका थिए । सोमेश्वरदेखि कोशीसम्मको क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष २ सयदेखि ३ सय हात्तीलाई जंगलबाट कब्जा गरेर भारतमा बिक्री गर्न लैजाने चलन थियो । अहिले यो क्षेत्र प्रदेश २ मा पर्छ ।
सबैभन्दा कम वनक्षेत्र भएका जिल्ला त्यहीं पर्छन् । जनघनत्व त्यहीं बढी छ । बाढीको प्रकोपले त्यहींका मानिस बढी प्रभावित छन् । सप्तकोशी शत्रुभन्दा निर्दयी बनेर पुरा जिल्लै सप्तरी (सप्त+अरी) को नामले स्थापित छ । प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा मानिस एक जीवन बाँच्न हजार मृत्यु सामना गर्छन् ।
प्रदेश–२ मा केही मौलिक वन बाँकी रहेको क्षेत्र बारा, पर्सा र रौतहटमा पर्छ । बाराको वन चर्को विवादमा छ । त्यस जिल्लामा ३० हजार ८ सय हेक्टर वनक्षेत्र छ । त्यसमध्ये २७ प्रतिशत अर्थात लगभग ८ हजार हेक्टर वन मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसका लागि आवश्यक नगर निर्माणको प्रस्ताव छ ।
त्यस आयोजनाको विवरणले २४ लाख रूख बारा जिल्लामा काटिने र त्यसको बदला ६ करोड १२ लाख रूख अन्यत्र रोप्ने कुरा बताइन्छ । रूख रोप्ने कहाँ हो, यकिन छैन । रूख रोपिहाल्दा पनि सयौं वर्षको समयावधिपछि मात्र वनले आफ्नो स्वरुप लेला । भनिन्छ, सालको वृक्ष ‘सौ साल खडा, सौ साल लडा र सौ साल सडा’ । समयान्धि सोच वातावरणका लागि उपयुक्त हुँदैन ।
‘तराई हेर कति राम्रो हरियो वन हुनाले’ भन्ने लोकप्रिय गीत २०१७ साल पहिलेको नेपालमा अति उपयुक्त हुने थियो । त्यसबेला वनका रक्षक एवं संरक्षक थिए, लामखुट्टे र तिनका भाञ्जा औलोको ज्वरो । औलो निर्मूल भएदेखि तराई–मधेस वन कसैबाट सुरक्षित भएन । विसं २०१७ देखि २०३७ सम्म निकै वन फँडानी भयो । वनक्षेत्र घटेर ६ लाख ४५ हजार ३ सय हेक्टरमा झर्‍यो । २०५० सालताका ५ लाख ४५ हजार ९ सय हेक्टरमा झर्‍यो ।
चार वर्ष पहिले सन् २०१४ को सरकारी आँकडाले तराई क्षेत्रको २०.४१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र वनक्षेत्र (४ लाख ११ हजार ५ सय ८० हेक्टर) रहेको देखाउँछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुदूर–पश्चिम प्रदेशको राजधानी बसाउन तराई भावरको वनमाथि नयाँ दबाब सिर्जना हुँदैछ ।
तराई भावर र चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हाल मौजुदा वन क्षेत्रको अहं भूमिकालाई बिर्सेर वन अतिक्रमण र जग्गा अधिग्रहण गर्न थाल्नु विकास नभई विनाशको कारण बन्न सक्छ । वातावरणीय सन्तुलन र स्थिरतामा आघात पुग्छ । अझ चुरेलाई चिरेर पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग निर्माण गर्ने हो भने त्यो ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ हुन जानेछ ।
तराईको वनजंगल र संरक्षित क्षेत्रहरू विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिका अन्तिम आश्रयस्थलका रूपमा मौजुद छन् । संरक्षित क्षेत्रलाई बाहिरी अरू वन क्षेत्रले जैविक मार्ग र आश्रयस्थलको टेवा दिनसकेन भने हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू मानव सागरका बीचमा टुप्लुक्क टापुमात्र हुनेछन् । तिनको भविष्य लामो हुँदैन । आजभोलि चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थलले जंगली हात्तीको आवत–जावत गर्ने जैविक मार्ग अवरुद्ध हुन्छ । कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा वन विनाश भयो भने पाटेबाघको जैविक मार्ग अवरुद्ध हुन्छ । बाघ, हात्ती, गैंडा आदि जीवजन्तु पर्यावरणका ‘स्ट्रिट लाइट’जस्तै संकेत चिह्नमात्र हुन् ।
तराई, भावर, चुरे र मधेसको वनलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने यस क्षेत्रको कृषि विकासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तराई–मधेसलाई अन्नबाली उत्पादनको मूल थलो बनाउने सपना साकार हुँदैन । तराईका जिल्लाहरू जाडो याममा शीतलहरको सिकार बनिरहेका छन् । भारतको काश्मिरदेखि बंगलादेशसम्म शीतलहरबाट प्रभावित हुन्छन् । यसको मूल कारण वन विनाश र प्रदूषण विकास हुन् ।
तराईको वातावरणीय सुरक्षाका लागि न्युनतम वनक्षेत्र कति आवश्यक पर्छ र हाम्रा संवेदनशील क्षेत्रहरू कहाँ छन् भन्ने शीघ्र पहिचान हुनुपर्छ । तराई, भावर र चुरेका अति संवेदनशील क्षेत्रका लागि संरक्षण नीति पनि तर्जुमा हुनुपर्छ । त्यसो हुनसके मात्र नेपालको ५४.२६ प्रतिशत जनसंख्या बोक्ने भूमि स्थिर र दिगो बन्न सक्ला ।
नेपालको अस्तित्व हिमाल, पहाड र तराईको सहअस्तित्वमा टिकेको छ । हराभरा तराई, रसिलो पहाड र सुन्दर हिमालको परिदृश्यमा नेपालको पहिचान खुल्छ । जनसंख्या वृद्धि र त्यसभित्रको चलखेल, भू–उपयोगमा फेरबदल तथा जलवायु परिवर्तनका विशेष प्रभावले हिमाल पग्लन थालेको छ ।
पहाड भत्कन थालेको छ । तराई मरुभूमि बन्दैछ । मरुभूमिलाई फुलााएर मह र दूधको देश बनाउने संकल्प इजरायलीले पुरा गरे । अब नेपालीले तराईलाई अन्नभण्डार, पहाडलाई फलफूल–तरकारीको बागवानी र लेकाली क्षेत्रलाई पशुधन र जडीबुटीले सम्पन्न बनाउने अठोट गर्नुपरेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनको परिदृश्यमा सेवाबाट प्राप्त हुने राशिलाई व्यापारले जित्नुछ र व्यापारलाई कृषिले उछिन्नुछ ।
कृषि, व्यापार र सेवाको सन्तुलित अनुपातलाई मजबुत बनाउन वन र हरियाली अनि वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणलाई भुल्नु हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक शक्ति सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाली जनशक्ति र जलशक्तिलाई सर्वोपरि महत्त्व दिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई विपनामा साकार पार्न नेपाललाई ब्युँझेर हेर्न सकौं । शुभकामना ।
मदन पुरस्कार वितरण समारोहमा बिहीबार प्रस्तुत प्रवचन ।
यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
Previous Articleप्रदेश कर्मचारी बेखर्ची
Next Article अनिशले पहिरिए लिगलिगकोटमा श्रीपेच